Google gbubiri ọnụahịa Huawei Watch site na euro 100 na Googlelọ Ahịa Google | Akụkọ akụrụngwa
Google belata ego nke Huawei Watch site na euro 100 na Googlelọ Ahịa Google ya
N'agbanyeghị na-adịbeghị anya n'ihu site Samsung Gear S3 ma ọ bụ Asus Zenwatch 3 el Huawei Watch Ọ ka bụ otu n'ime smartwatches kachasị mma anyị nwere ike ịchọta n'ahịa, n'ihi ọmarịcha njiri mara ya na nkọwapụta ya na nkọwa ya bụ n'ezie ọ kacha mma na ahịa. Nakwa taa anyị nwere ozi ọma banyere igwe ihe igwe ojii nke ndị China mebere.
Ma ọ bụ ya Google, anyị chere na site na Huawei, belata ọnụahịa nke Huawei Watch site na euro 100, na-ahapụ ọnụahịa ya na euro 349. Na mbụ anyị nwere ike ịchọta ngwaọrụ maka ọnụahịa nke ruru 449 euro.
Buru n'uche na iwu ndị enyere na Storelọ Ahịa Google enweghị ọnụ ahịa maka mbupu ụgbọ mmiri. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwekwara ike ịzụta Huawei Watch a site na Amazon, na-enweghị nkwa dị ebube nke Google na-enye n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkwa niile.
Na ọnụahịa dị na ụlọ ahịa mebere ọ dị ọnụ ala karịa nke anyị hụrụ na Storelọ Ahịa Google, ọ bụ ezie na a na-eme nke a site na ndị na-ere ahịa n'èzí. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta ya site na Amazon ị nwere ike ịzụta Huawei Watch a maka euro 345, ya bụ, ịkwụ ụgwọ ihe maka ụgwọ mbupu.
Na-atụle ohere ị nwere iji nweta Huawei Watch na ego dị ntakịrị nke Google kwadebeere anyị?. Gwa anyi na ohere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọdu ndi anyi no.
Ozi ndị ọzọ - Ụlọ Ahịa Google
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Google belata ego nke Huawei Watch site na euro 100 na Googlelọ Ahịa Google ya
Na ọnụahịa ahụ, ọ bụghị nzuzu. Aga m echere Assus 3.
Huawei Nova na Nova Plus, Huawei ọhụụ ọhụrụ
Lenovo na-enye Moto Z Play, Motorola nwere ikike ndi ozo nke oge a